agile anogona kubudirira pasina otomatiki kuyedza?
Kuru Agile Anogona Agile Kubudirira Pasina Kuzviongorora Kwayedza?
Anogona Agile Kubudirira Pasina Kuzviongorora Kwayedza?
Kuzviongorora Kwayedza kunonyatsodiwa mumabasa ekukurumidza? Tinogona here kunonoka pasina chero otomatiki kuyedzwa?
Kana isu tichitaura nezve automated kuyedza, isu tinofanirwa kuziva kuti ndeipi dura (yuniti, API, UI) yatiri kutaura nezvayo.
Ini ndashanda mumasangano mazhinji anga achinetsekana, asi chimiro chekuyedza otomatiki pazvikamu zvese chaive chakashata uye chisingashande zvekuti zvaiita sekunge chisipo, YET, ivo vaiburitsa software mavhiki maviri ega ega mukugadzira pasina hiccup yakawanda.
Handisi kureva kuti otomatiki kuyedza kupedza nguva, asi ini ndaona vanhu vachiburitsa software nekungoyedza zvemanyore.
Nekudaro, dambudziko rekushaya chero otomatiki bvunzo nderekuti pese paunoda kuburitsa software kuti igadzire iwe unoburitsa nekutya uye usina chivimbo chekuti software yacho yakasimba, nekuti pane chete zvakanyanya iwe zvaunogona kuyedza nemaoko.
Ini ndingati, iwe unoda otomatiki mayuniti eiyuniti uye otomatiki kusangana / api bvunzo, asi pamwe hazvidiwe kuti uwane yakazara suite yeakareba otomatiki magumo-kumagumo bvunzo kuburikidza neUI, sezvo ivo vari kunonoka kumhanya uye inodhura kuchengetedza.
Nekudaro, kupedzisa, otomatiki kuyedza kunobatsira mapurojekiti anokasira kuburitsa kodhi yemhando yepamusoro kuburikidza nekuenderera mberi nekutarisa uye nekupa mhinduro nekukurumidza, saka mumwe angati chinhu chakakosha chemapurojekiti agile, zvisinei, inopa kukosha kwazvo kana timu yese yakatarisana nemuedzo. kushandisa michina uye kuti bvunzo dzinoitwa otomatiki kuuniti uye API dura.
Kuyedza kuburikidza neUI kunofanira kungotarisa nzendo dzevashandisi kwete iko kuzadziswa kunoshanda kweese maficha
maitiro ekugadzirisa rwiyo
T-Mobile inoti iyo yayo Galaxy Note 8 ichatanga kutumira munguva pfupi (kune avo & pre-ve-yakarairwa)
Akanakisa maapplication eSamsung Galaxy Watch, Gear S3, uye Sport